Ciidamada dalka Suudaan oo laayey 5 qof oo ka mid ahaa dad dibadbax dhigaayey. – Xeernews24
Ciidamada dalka Suudaan oo laayey 5 qof oo ka mid ahaa dad dibadbax dhigaayey.
30. Juli 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Culeys ayaa soo food-saaray heshiiskii nabaadda ee dalka Suudaan, kadib markii afar caruur arday ah iyo dadkale lagu dilay dibadbaxyo ka dhacay Magaalada El Obeid, ee gobolka Kordofaan.
Isbaheysiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaas, ayaa sheegay in laamaha ammaanka ee Suudaan ay rasaas ooda kaga qaadeen dadkan oo ay ka mid yihiin arday dhigata dugsi sare, kuwaas oo ka cabanayay shidaalka iyo cuntada oo aad gabaabsi u ah, waxayna ku baaqeen dibadbaxyo ballaadhan oo dalka oo dhan.
Sidoo kale ururka aqoonyahanada dalkaas, oo hormuud ka ahaa isbadelkii ka dhacay Suudaan ayaa waxay dalbadeen in si dhakhsi ah awoodda loogu wareejiyo dowlad rayid ah.
Muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya ardayda oo ku hor bannaan baxaya isbitalka weyn ee Magaalada El Obeid, kadib markii dadka la laayay.
Wariyaha BBC-da ee Suudaan ayaa ku soo waramay in dadkale ay iyaguna isugu soo baxeen caasimadda Khartoum.
Dadkan ayaa ku qeylinayay in „Qofkii wax dilay isna ha la dilo“, waxaana bandaw lagu soo rogay Magaalada iyo dhowr Magaalo oo kale.
Sidoo kale waxaa la xidhay dhamaan goobaha waxbarashada ee gobolka Kordofaan. Dhawaan ayaa lagu wadaa hogaamiyeyaasha dibadbaxayaasha iyo golaha milateriga ay yeeshan wadahadalo kale, si loo soo dhiso dowlad ku meel gaadh ah oo awood qeybsi ah.
Dalka Suudaan ayaa intii xukunka laga tuuray Madaxweynihii hore ee Cumar Al- Bashir waxaa ka tagnaa qalalaaso iyo dibadbaxyo ka dhan ah milateriga xukunka la wareegay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/07/sudan-protesters-2907.jpg 576 1024 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-07-30 10:20:422019-07-30 10:20:42Ciidamada dalka Suudaan oo laayey 5 qof oo ka mid ahaa dad dibadbax dhigaayey.
Dhageyso khilaafka ee Mustafa cagjar iyo Axmed Shide Soomaali-State Oo Ku Gacansaydhay Digniinta Maraykanka.